Nosy Borneo : fampiraisana ireo mpitoraka bilaogy amin’ny alalan’ny Borneo Colours · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2010 21:56 GMT
Tranonkala mampiray ireo mpitoraka bilaogy avy any Brunei, Sabah, Sarawak, Labuan (Malezia) ary Kalimantan (Indonezia) izay ao amin'ny nosy Borneo ny Borneo Colours. Sehatra ho an'ireo mpitoraka bilaogy any amin'iny faritra iny izy io hifandraisany ny hampisy ffifankahazoana bebe kokoa eo amin'ny mpiray vodirindrina.
Hatramin'ny androany, mihoatra ny 1000 ireo mpikambana ao amin'ny Borneo Colours na BC ary mahatratra 200 ireo mpitoraka bilaogy voasoratra anarana, ary voalaza fa miakatra isan'andro izany isa izany. Raha nifampiresaka tamin'ny filoha tale jeneraly sady mpanorina ny vohikala i Daniel Doughty no nizara niaraka tamin'ny mpanoratra ny tantaran'ny vohikala.
Nandritra ny fanombohan'ny taona 2002 no nitsirian'ny hevitra. Ny tanjona dia ny hanamora sy hankahery ireo ao Borneo hahay hampandroso an'izao tontolo izao. Taty aoriana, hitan'ny mpanorina fa mila fanamby ara-bola goavana ny fitazonana ny tetik'asa antsoina hoe “Borneo” ity. Tokony ho tamin'ny taona 2007, nangina ny famoahana ny BC saingy indrisy tavela vetivety ny hevitra fa nasaina hanampy ONG iraisam-pirenena ny mpamorona hampianatra ny tetikasa momba ny fiarovana ny tontolo an-dranomasina. Tamin'ny fiantombohan'ny taona 2009 no nanapa-kevitra ny hamelona indray ny hevitra ny mpamorona. Teo ho eo amin'ny volana Jolay 2009, raha nahazo teti-bola sy fanohanana vaovao, nanomboka ny asany tamin'ny fampiroboroboana ny heviny ho an'ny fokonolona ao amin'ny nosy Borneo sy ho an'ny tontolon'ny fizahan-tany any Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei ary Kalimantan ny ekipan'ny BorneoColours.com. Nosokafana tsimoramora ny BC tamin'ny 25 Septambra 2009 saingy tamin'ny volana Janoary vao tena niasa izany.
Inona ny noeritreretinao mikasika ny Borneo Colours?
Mba ho fampitam-baovao ofisialy sy ho vavahadim-balan-tserasera ankatoavin'ireo governemanta ka anisan'izany ny nosy Borneo, fa ny tena zava-dehibe dia ny faneken'ny mponin'i Borneo ary ny fiaraha-monina iraisam-pirenena amin'ny aterineto . Tanjonay ihany koa ny hanatsara ny borneocolours.com mba hahazoana famatsiam-bola maharitra sy mangarahara mba hanangonana fanampiana ho an'ny fikambanana manao asa soa eo an-toerana, ny fampivoarana ny fiaraha-monina ary ny fanentanana fampahalalana ny asa manodidina ny tontolo iainana ao amin'ny nosy .
Inona no mety ho azon'ny tsirairay amin'ny famakiana na fidirana mpikambana amin'ny Borneo Colours?
Amin'ny voalohany dia ny mpikambana nisoratra anarana fantatra ihany koa amin'ny hoe bcbuddy no nanome ny votoaty. Mitantara sy mampiroborobo hetsika, zava-nitranga ary nampiseho ny talentany sy lahatsoratra mahaliana sy mety ilain'ny hafa ny ekipa. Misy ihany koa ny lisitry ny fandraharahana ao Borneo sy ny lisitry ny mpamaham-bolongana. Ny mampiavaka ary ireharehan'ny Borneo Colours dia ny fisian'ny fitaovan'ny valan-tserasera misy itovizany amin'ny an'ny Facebook.
Manomana fifaninanana fitorahana bilaogy ianareo ao amin'ny Borneo Colours? Inona no tanjona tianareo ho tratrarina amin'izany fifaninana izany ?
Natao hamantampantarana sy handraisana ireo mpitoraka bilaogy ary ifankahazoan'izy ireo io fifaninanana ho an'ny Bilaogera 2010 io, mba hahazoany, hanekeny ary hitiavany ny fahasamihafana amin'ny tsirairay fa ny tena zava-dehibe dia ny hananganana karazana Borneo tsy misy sisin-tany . Manantena koa izahay fa hanampy ireo mpitoraka bilaogy ao Borneo ity fandaharam-potoana ity mba ho afa-mifaninana kokoa ry zareo ka hanatsara ny votoaty, ny endrika, ary hamoron-java-vaovao amin'izay soratany. Amin'ny farany , iza moa no hahavita tsara kokoa ny fampiroboroboana ny fizahantaniny sy ny toerana tsara aleha raha tsy ireo mpitoraka bilaogy ihany .
Misy lamina ho amin'ny ho avy ve ?
Hikarakara resadresaka antsoina hoe B2.0 toy ny any Borneo2.0 “Borneo Bloggers + New Media Dialogue” ny BorneoColours.com. Nalahatra ho atao any 1Borneo, Kota Kinabalu, Sabah amin'ny tapaky ny volana Oktobra 2010 ity resadresaka ity . Tokony hitondra ny tambatr'ireo fiaraha-monin'ny bilaogy samihafa ny B2.0 ary tokony hanome fotoana tsara maro manan-karena hianarana, hanaovana tambajotra sy hivelarana ho an'ireo mpampiasa haino aman-jery vaovao iraisam-pirenena sy eto an-toerana izay mahay amin'ny famoronana .
Maro ireo mpitoraka bilaogy avy amin'ny nosy Borneo no niantsoroka an'i BC :
Milaza i A Woman Diary ” Ahitana ireo zavatra tianao ho fantatra mikasika an'i Borneo. Vitan'ny Borneo-an. Tiako”
Nanana an'ity i Rungitom, BC buddy iray hampidirana ny Borneo Colours.
BC Buddy ve ianao? Raha tsia, maninona ianao ry namana raha mijery ny BorneoColours. Tranonkala iray izy ity hahitanao ny fanazavana rehetra mikasika an'i Borneo voalaza miaraka amin'ny fiasan'ny tambajotra ara-piaraha-monina. Toerana iray i BC Buddy ho an'ny fiaraha-monina amin'ny aterineto mba hiantona toy ny tranonkalan'ny tambajotra ara-tsosialy hafa .
Milaza i Choco8Vanilla fa
Voalaza ho tranonkala natao hampitambatra ny vahoaka i Borneo Colours mba hahalala kokoa ny momba an'i Borneo na hampitambatra ny vahoakan'i Borneo ihany aza mikasika ny nosy tiany sy ireo vaovao farany na tsotra fotsiny, mba ho mpinamana (Tsy tsara ve izany ? XD). Vaovao ny tranonkala. Nefa misy olona maro vaovao tonga foana isan'andro, tsy mba te ho isan'izany fiaraha-monina tsara izany ve ianao ? Saika … mitovitovy … na sahala … amin'ny facebook na friendster na tagged (angamba?) izy. Ankoatran'ny tranonkala, nanana zavatra fanampiny koa aho (tokony hijanona hatreto ve aho WOW!) izay hahatonga anareo rehetra mpitoraka bilaogy Borneana hanindry ny bokotra ‘Midira mpikambana’ …inona ary izany?
Milaza i Pearls Stud Earrings ao amin'ny bilaoginy ,
efa 5 volana sahady izay hatramin'ny andro voalohany nanoratako anarana ho Borneo Colours Buddy. Inona no azoko amin'ny maha-mpikambana ahy ???? NAMANA betsaka!! ^-^/ ary afaka manaparitaka bebe kokoa ny bilaogiko aho .
Manantena ny hitondra hatrany Brunei ny anarana i Geek in White, hany Bruneian tokana lany tamin'ny fiodinana famaranana tamin'ireo fifidianana tamin'ny Blogging Competition, ka tena hametraka ireo mpitoraka bilaogy Brunei amin'ny sarin-tany. Raha tena mandresy amin'ity aho (amena!), mianiana aho ny hizara ireo fomba fanao miaraka amin'ireo vondrona mpanao asa soa eo an-toerana